Banky SG Madagasikara: hamafisina ny maha orinasa tomponandraikitra | NewsMada
Banky SG Madagasikara: hamafisina ny maha orinasa tomponandraikitra
Par Taratra sur 30/11/2021
Ankoatra ny maha bankim-barotra ny Société générale (SG) Madagasikara, tsy ataony ambanin-javatra ny lafiny maha orinasa tomponandraikitra (RSE) azy eo amin’ny fiaraha-monina. Isan’izany ny fanatsarana ny fahasalamana ho an’ny reny sy ny zaza ao anatin’ny fandaharanasa « paikady mandroso » (stratégie avancée). Tanjona ny hampihenana ny isan’ny reny sy ny zaza maty eo am-piterahana any amin’ny faritra mahantra eto Antananarivo Renivohitra. Nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa, omaly, tetsy amin’ny amin’ny Pavillon Sainte-Fleur ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, ny tale jeneraly ny SG Madagasikara, i Zdenek Metelak, sy ny talen’ny Pavillon Ste-Fleur, Eric de la Rochefoucauld.
Voarakitr’izany ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ny vehivavy bevohoka any amin’ny fokontany marefo sy ny fanentanana ny lanjan’ny fanaraha-maso ny fitondrana vohoka. Hamafisina ny fahaiza-manaon’ny mpitsabo sy ny fitaovana ary ny fotodrafitrasa eny amin’ny toeram-pitsaboana. Hahena ny fahafatesan’ny reny sy ny aza eo am-piterahana.
Hisy ny ekipa handeha hitety ireo toeram-pitsaboana miisa 12 ao anatin’ny fandaharanasa “paikady mandroso” any amin’ny fokontany sahirana eto an-dRenivohitra. Maimaim-poana ny fitsirihana ny fahasalaman’ny reny bevohoka. Hojerena manokana ireo mety ahina hisy fahasahirana eo am-piterahana. Raisina maimaim-poana ao amin’ny Pavillon Ste-Fleur ireo zaza vao teraka aiditra hopitaly.